slider img – Online Jagaran
Category: slider img
कस्तो मासु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ? डाक्टरको सुझाव सुन्नुहोस् अडियोमा
२७ आश्विन २०७८, बुधबार १४:०२ October 13, 2021 जागरण
सुर्खेत, २७ असोज (जागरण) । दशैँ तिहारलगायत चाडपर्वमा मासुको खपत धेरै हुने गर्दछ । मासुको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि कत्तिको फाइदाजनक छ त ? मासुको प्रयोग कसरी गर्ने ? कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत जनरल फिजिसिएन डाक्टर केएन पौडेलसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस अडियोमा ।
२७ आश्विन २०७८, बुधबार १३:४८ October 13, 2021 जागरण
सुर्खेत, २७ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल जलवायु परिर्वतन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएपी–२) ले कर्णालीका २६ वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो । कार्यक्रमले अध्ययनका क्रममा २६ वटै स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्सांकन गरेको छ । डोजरमार्फत […]
सुर्खेत, २७ असोज (जागरण) । सुर्खेतका तीनवटा स्थानीय तहका महिलाहरुले दशैँ–तिहारलाई लक्षित गरेर ५ हजारभन्दा बढी खसी काठमाडौँ र पोखरा निर्यात गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न महिला सहकारीमा आवद्ध महिलाहरुले पालेको ५ हजार ७ सय ३७ वटा १० करोड ४८ लाख १६ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको […]
अहिलेको शैक्षिक प्रर्णाली परिवर्तन गर्नुपर्छः सरोकारवाला
२५ आश्विन २०७८, सोमबार १७:५२ October 11, 2021 जागरण
टेकराज केसी । सुर्खेत, २५ असोज (जागरण) । कर्णालीका प्रदेशका सरोकारवालाहरुले अहिलेको शैक्षिक प्रर्णाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन । एनसिएफ र सुन्दर नेपालले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णालीको शिक्षाको अवस्था र सुधार प्रयास अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन । उनिहरुले अहिलेको शिक्षा प्रर्णालीले बेरोजगार जनशक्ती मात्र उत्पादन गरेको भन्दै अब […]
अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कर्णाली प्रदेशमा कस्ता योजना छन ? (सुन्नुहोस अडियोमा)
२५ आश्विन २०७८, सोमबार १२:४९ October 11, 2021 जागरण
सुर्खेत, २५ असोज (जागरण) । चाडपर्व नजिकिएसँगै विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कर्णाली प्रदेश प्रहरीले कस्ता योजना बनाएको छ त ? यही विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी माधव प्रसाद श्रेष्टसँग गरेको कुराकानीको अडियो सुन्नुहोस् ।